မဗဒေါရဲ့ ဗဒေါလမျး: Cute and nice idea for photoshoot in bed
Posted by mabaydar at 10:14 AM
Wow! Impressive.. Thanks for sharing Sis...
Cameraman must beaspiderman... Justathought!! Love the ideas... Need spiderman :)))
11/02/2011 10:16 PM
Dip in IT တက်တုန်းက ပရိုဂရမ်းမင်း သင်ခဲ့ရသေးတယ်။ ရှုပ်ထွေးပြီး စိတ်ညစ်စရာကောင်းတာမို့ စာမေးပွဲအောင်ရုံလောက်သာ လေ့လာခဲ့မိတယ်
ခုနေခါမှာ တစ်လုံးတောင် ပြန်သတိမရတော့ဘူး။ စိတ်ဝင်စားတာ အဲသလို.. အိပ်ရာပေါ်က အိုင်ဒီယာလေးတွေ သဘောကျတယ် ရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေးနဲ့ စိတ်ဝင်စားဖို့ ကောင်းနေတယ်.။. စိတ်ကူးကောင်းလေးတွေဘဲနော်
ကိုယ်တွေကျတော့ အဲသလိုစိတ်ကူးကို မထွက်တား)
ပရိုဂရမ်းမင်းလည်း မသိပါဘူး.....မဗေဒါတင်ပေးလို့..အိုင်ဒဒီယာလေးတော့ ချီးကျူးမိတယ်.....တော်တော် ကောင်းတဲ့ညဏ်ဘဲ...ကျေးကျေးမဗေဒါ.....
3/02/2012 1:50 AM